netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:ဆံကေသာသုံးအလှကုန်များ
“ Acer On Top ” Promotion ( End User )
အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး /
Miseen Scene Scalp Shampoo 200ml
Scalp Care Shampoo သည် ဆံသားအရင်းမှအဖျားအထိ ရေဓါတ်ထိမ်းသိမ်းပေးကာ ဦးရေပြားအား ၇နာရီကြာ သန့် ရှင်းအေးမြစေပါသည်။အာဖရိကမှ ကြာပန်း၊ဂျင်းနှင့် ၀ါဦးရည် ပါဝင်သောကြောင့် ဦးရေပြားအား အေးမြစေ၍ ဗောက်ထခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဦးရေပြားအား အေးမြစေခြင်းဖြင့် ဆံကေသာအား အသစ်တဖန် ပြန်လည်ရှင်သန်စေပါသည်။
Miseen Scene Damage Care Shampoo 200ml
အဆီပြန် ကျိုးပြတ်လွယ်၊ ရှုပ်ထွေး၍ ကျွတ်လွယ်သော ဆံသားများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ Argan Oil နှစ်ဆပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဆံသားချောမွေ့ စေပြီး အဖျား၂ခွဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Royal Jelly ဧ။်အကျိုးဖြင့် ပိုမို သန်စွမ်းပြီး ဖြီးလွယ် ရှင်းလွယ်သောဆံသားအား ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။ Rose Water ပါဝင်မှုဖြင့်ဦးရေပြား ခြောက်သွေ့ မှု(PH Level) ကိုညှိုပေးကာဆံသားကျွတ်လွယ်မှုကိုလျှော့ နည်းစေပါသည်။
Miseen Scene Anti-Aging Shampoo 200ml
Antioxidant Nutri - Collagen ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဦးရေပြားဧ။်အတွင်းအပြင်သာမက ဆံသားအရင်းအဖျားအထိ အားဖြည့်ပေးသဖြင့် ထိပ်ပြောင်သော၊ဆံပင်အလွန်ပါးလွှာသောဆံသားများအတွက် အထူးသင့်လျှော်ပါသည်။ Super Berry EX - TRACT အစွမ်းဖြင့် ဆံသားပြန်လည်ရှင်သန်ပြီး အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်သော ဦးရေပြားကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။ပါးလွှာ၍ ဆံသားတိုးပွားရန် လိုအပ်သော ဆံသားများအတွက်အထူးသင့်လျှော်ပါသည်။
Miseen Scene Shine Care Rinse (680ml)
ဆံကေသာအား အချိန်ကြာမြင့်စွာ တောက်ပပျော့ပျောင်းခြင်းကိုအဓိကထား အားဖြည့်ပေးပါသည်။ အဖျားဖွာ၍ ကြေမွနေသော ဆံသားများအား ဖြောင့်စင်းစေခြင်းဖြင့် ဆံကေသာအားထိရောက်စွာထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - ခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်တွင် Treatment အနည်းငယ်ကို လက်ဖ၀ါးထဲတွင်ထည့်၍ ပျံနှံ့ အောင်သုတ်လိမ်းပြီး ၃မိနစ်ခန့် စောင့်ပေးပါရန်။ ထို့ နောက် ရေအေး(သို့ )ရေနွေးဖြင့် လျှော်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
Miseen Scene Damage Care Conditioner (680ml)
ဦးရေပြားအား အချိန်ပိုမို ကြာမြင့်စွာ အေးမြစေပြီးဆံသားကို ယခင်ထက်၃ဆပိုမိုနူးညံ့ ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - ခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်တွင် Treatment အနည်းငယ်ကို လက်ဖ၀ါးထဲတွင်ထည့်၍ ပျံနှံ့ အောင်သုတ်လိမ်းပြီး ၃မိနစ်ခန့် စောင့်ပေးပါရန်။ ထို့ နောက် ရေအေး(သို့ )ရေနွေးဖြင့် လျှော်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
Miseen Scene Anti-Aging Conditioner (680ml)
ကြက်ဆူဆီ၊ Wolf Berry, Cranberry, Strawberry, Blueberry, Coffee, Rosemary, Soapberry Extract, Collagen ပါဝင်မှုဖြင့် ဦးရေပြားနှင့် ဆံသားအားပိုမိုကြာရှည်စွာအားဖြည့် ပေးပါသည်။ ဆံသားခြောက်သွေ့ ခြင်း ကျွတ်လွယ်ခြင်း တို့ မှကာကွယ်အားဖြည့်ပေးပါသည်။ ဆံပင်အမြန်ပေါက်နှုန်း မြန်စေရန် အဓိကထားကူညီပေးသည်။ အသုံးပြုပုံ - ခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်တွင် Treatment အနည်းငယ်ကို လက်ဖ၀ါးထဲတွင်ထည့်၍ ပျံနှံ့ အောင်သုတ်လိမ်းပြီး ၃မိနစ်ခန့် စောင့်ပေးပါရန်။ ထို့ နောက် ရေအေး(သို့ )ရေနွေးဖြင့် လျှော်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
Miseen Scene Scalp Conditioner (680ml)
-Mild green ingredient sooth sensitive scalp gently with refreshment.
-African lotus sooth scalp and provide hair nutrition.
-Ginger ingredient sooth sensitive scalp.
-Bamboo ingredient gives dry hair hydration for fresh and light moisture care.
-3-free (synthetic dye, animal raw materials, mineral oil)
Boya Q 10 Conditioner 500ml
Karmart မှထုတ်လုပ်ထားသော Boya Q10 Conditioner လေးကတော့ ဆံသားတွင်လိုအပ်သောအာဟာရကိုဖြည့်ဆည်ပေးသောကြောင့် ဆံပင်သားလေးများကိုနူးညံ့ပြီးတောက်ပြောင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Maithong Body Scruh (Bath Mitt)
-- Cell ဟောင်းများ အမည်းစက်များလျော့နည်းစေခြင်း - ဂျိုင်းကြား ဒူးခေါင်း ခြေမျက်စိတို့၏ ညိုမည်းခြင်းများကို ပြည်လည်ဖြူဖွေးစေခြင်း
- နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ညိုမည်းသွားသော အသားအရေကို ပြန်လည်ဖြူဖွေးစေနိုင်ခြင်း
- Shower အာနိသင်ပါဝင်ပြီး သီးသန့် ထပ်သုံးပေးစရာမလိုတော့ပါ
-အပြာရောင်ထုပ်က ဆန်နှင့် နနွမ်းအခြေခံပြီးထုပ်လုပ်ထာပါတယ် normal skinအသုံးပြူလုပ်ရပါတယ်။
-ပန်းရောင်က မင်းဂွတ်သီးကိုအခြေခံဖြစ်ထုပ်လုပ်ထားပါတယ် Oily skin အတွက်ပါ ။ ကျောကုန်းမှာဝက်ခြံထွက်သူအတွက်အထူကောင်းမွန်သည် ။
-အစိမ်းရောင်ထုပ်က ရှားစောင်းကိုအခြေခံပြီထုပ်လုပ်ထားပါသည် dry skin အသားခြောက်သောအသားရေ အတွက်အထူးကောင်းပါသည်
Maithong Organic Kaffir Lime Shampoo
-သဘာဝရှောက်သံပရာသီးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် ရှောက်သံပရာသီး၏မူလပကတိအကျိုးကျေးဇူးများက ဦးရေပြားအဆီပြန်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောဆံသားများ၊ ဖောက်ထခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတွေကို သက်သာစေပါသည်။ ရှောက်သံပရာသီး၏အအေးဓာတ်ကြောင့် ဦးရေပြားအေးမြလန်းဆန်းစေပြီး ဆံသားများကို နူးညံ့ချောမွေ့စေမှာပါ။
Maithong Organic Jasmine Shampoo
-စံပယ်ပန်းကို ပေါင်းခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်များကို ထူထဲလာစေပါသည်။ဆံသားများကိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေနိုင်ပါသည်။
Maithong Organic Coconut Shampoo
-အုန်းသီး၏အဆီအနှစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးနေသောဆံသားများနှင့် ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်နေသော ဆံသားများကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီး ဦးရေပြားခြောက်သွေ့ယားယံမှုကို ကင်းဝေးစေပါသည်။ ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေပါသည်။
Cathy Doll Q10 Shampoo 500ml Boya
-ဆံသားအတွက်လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်များပါဝင်သောကြောင့် ဆံသားအားလျင်မြန်စွာရှည်လျားစေသော shampooဖြစ်ပါသည်။
-NANO Q10 ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် ဦးရေပြားအတွင်းပိုင်းထိနက်ရှိုင်းစွာအားဖြည့်ပေးပြီး ပျက်စီးနေသော ဆံသားများကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်သော ခေါင်းလျော်ရည်ဖြစ်ပါသည်။
Boya Q 10 Shampoo 500ml Code:8858842022436
BOYA အမှတ်တံဆိပ် Q10 Shampoo လေးဟာဆိုရင်တော့ ဆံသားအတွက်လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်များပါဝင်သောကြောင့် ဆံသားအားလျင်မြန်စွာရှည်လျားစေသော shampoo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒါ့အပြင် NANO Q10 ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် ဦးရေပြားအတွင်းပိုင်းထိနက်ရှိုင်းစွာအားဖြည့်ပေးပြီး ပျက်စီးနေသော ဆံသားများကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်သော ခေါင်းလျော်ရည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Boya Q 10 Treatment Essence 680g Code:8858842022276
Boya မှထုတ်လုပ်လိုက်သော Q10 Hair Treatment လေးမှာဆိုရင်တော့ ဂျပန် food recipes မှရရှိသော ကဆော် နှင့် Vitamin များပါဝင်သောကြောင့် ဦးရေပြားအားကျန်းမာစေသည့်အပြင် (7)ရက်အတွင်း ဆံသားများအားအရင်းမှအဖျားထိ ပိုးသားကဲ့သို့ တောက်ပြောင်လှပစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Miseen Scene Shine Care Mist (140ml)
ဆံသားပုံသွင်းရာတွင် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေရုံသာမက သဘာဝအတိုင်း တောက်ပြောင်နက်ရှိုင်းသောပုံကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။ှဆံသားအရင်းမှ အဖျားအထိ အားဖြည့်ကာ ဦးရေပြားထဲသို့ Nutrition Essence ဖြင့် ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ဆံသားအတွင်းလိုအပ်သော Amino Protein ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကြေမွခြင်းကို အထူးကာကွယ်ပေးပါသည်။အားဖြည့်ဆီနှင့် ရေပေါင်းစပ်ထား ခြင်းကြောင့် စေးကပ်မှုမရှိပဲ Hair Coat များကဲ့သို့ အားဖြည့်ပေးသည်။
Miseen Scene Pearl Shining Milky Essence (200ml)
ဆံသားဧ။်လိုအပ်သော ရေဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးပြီး Moisture Level အားမြှင့်တတ်စေ၍ ဆံသားပျက်စီးမှုအား ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ကောက်သားဆံသားများအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားပါသည်။Pearl Protein ပါဝင်မှုဖြင့် ဆံသားအားဖြည့် ပြန်လည်ရှင်သန်စေပြီး Carviar Vitamin From Marine Fish အကျိုးဖြင့် ဆံသားအား နက်မှောင်ထူထဲစေပါသည်။
Miseen Scene Pearl Shining Treatment (180ml)
Vital Vitamins From Marine Fish ဧ။်အကျိုးဖြင့် ထိရောက်စွာ ဆံကေသာအာဟာရ ဖြည့်သွင်းပေးပြီး ရှည်လျားနှုန်းမြန်စေသည်။ အသုံးပြုပုံ - ခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်တွင် Treatment အနည်းငယ်ကို လက်ဖ၀ါးထဲတွင် ထည့်၍ ပျံ့ နှံ့ အောင်သုတ်လိမ်းပြီး (၃)မိနစ်ခန့် စောင့်ပေးပါရန်၊ ထို့ နောက် ရေအေး (သို့ ) ရေနွေးဖြင့် လျှော်ပေးခြင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
Min: 2($) Max: 22($)
All CC Cream Conditioner Hair Styler Hair-Dye MIST Serum Shampoo Treatment ဆံပင်အလှအပ ခေါင်းလျှော်ရည်
All Karmart Life Maithong Miseen Sce'ne Soulmate Naturals
Series ရွေးရန် Clear
All Anti-Aging Damage Care Pearl Shining Perfect Repair Shine Care
Custom Text Clear
All Blue Pink Green
All 500ml Lavender 3oz(685239804188) Citrus 3oz(685239804195) Peppermint & Tea 30z(685239804201) Lavender 8oz(685239804157) Citrus 8oz(685239804164) Peppermint & Tea 30z(685239804171) 680g
All Ma'suri Life Soulmate Karmart Miseen sce'ne Maithong COW